Burcada Kenyaatiga oo dhac ku haya Soomaalida Islii | KEYDMEDIA ENGLISH
Burcada Kenyaatiga oo dhac ku haya Soomaalida Islii
Burcada kenyaatiga ayaa xilligan, dhibaatooyin dhac ah u geysanaya shacabka Soomaalida ee ku nool xaafada Islii ee magaalada Nairobi.
ISLII, Kenya- Dadka Soomaalida ee ku nool, xaafada ay soomaalidu ku badan tahay ee Islii, ayaa ka cabanaya waqtigan dhac ay u geysanayaan burcad kenyaati ah.
Dadka cabanaya oo u badan ganacsato, ayaa sheegaya, in toorreeyo ay ku hubeysan yihiin burcada dhaca geysaneyso, waana kuwo uu afku u xiran yahay, oo ku dhuunta ciriiriga badan ee ka jira Suuqa Islii ee magaalada Nairobi.
Bulshada Soomaaliyeed ee ka ganacsata Islii ayaa tilmaamay, in cabashadooda ay u gudbiyeen ciidamada booliska ee xaafadahaas ka howl-galla, waxaana iminka socda baaritaano lagu baadigoobayo burcadii falalkaasi ka danbeysay.
Waxey sheegeen in booliska kenya, uu ka gaabinayo dadaalada lagu sugayo amniga suuqa Islii, iyagoo codsaday in ciidamo gaar ah la keeno suuqaas, si ay meesha uga baxaan falalka dhaca ah, ee maalmahan soo cusboonaaday.
Soomaalida Islii ku dhaqan, ayaa hoosta ka xariiqay, in dadka dhaca geysanaya, ay ku jiraan dhallinyaro Soomaaliyeed, waxaana kuwa burcada ah, ay isugu xiran yihiin koox koox, taas oo culeyska iyo wal walka ku kordhineysa dadka ganacsatada ah.
Dalka Kenya ayaa ka mid ah, wadamada dariska ah, ee ay Soomaalidu maciinsatay bur burkii dalka kadib, iyagoo halkaas ka yagleeshay ganacsiyo kala duwan, waxaana badankood ay deggan yihiin xaafada Islii, oo marka aad joogto nolosheedu, u muuqaal egtahay midii dalka.